भ्या’क्सिन – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /International/भ्या’क्सिन
रुसले कोरोना भा’इरसको भ्या’क्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले विभिन्न देशहरुमा भ्या’क्सिनको माग भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाले र युरोपमा पनि भ्या’क्सिनको विकास हुँदैछ । स’म्भ’वत सन् २०२१ को शुरुमा भ्या’क्सिन विकास गरी
प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले सैनिक र स्वा’स्थ्यक’र्मी’मा कोरोना भ्या’क्सिनको प्रयोग शुरु गरिसकेको छ सँसारका शक्तिशाली र धनी देशहरुले कोरोना भाइरसको भ्या’क्सिन विकास गरी प्रयोगको समेत तयारी गरेका छन् । तर, आर्थिक रुपमा विप\_न्न देशहरुले भ्या’क्सिन कहिले प्रयोग गर्न पाउलान्
यो ग’म्भीर प्रश्न बनेको छ ।
नेपालमा भ्या’क्सिन कहिले आइपुग्ला ? यसलाई केलाउँदा भ्या’क्सिन कति प्रकारका उत्पादन हुन्छन ? कुन कुन देशले उत्पादन गर्छन् ? कति मात्रामा उत्पादन गर्छन् ? मुल्य कति पर्छ ? माग र आपू’र्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला👇